Pompeo ayaa baajiyey safar uu ku tegi lahaa Yurub kadib markii saraakiisha Midowga Yurub… – Hagaag.com
Pompeo ayaa baajiyey safar uu ku tegi lahaa Yurub kadib markii saraakiisha Midowga Yurub…
Posted on 13 Janaayo 2021 by Admin in World // 0 Comments
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay ilo xog ogaal ah in Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka, Mike Pompeo, uu baajiyay safar dublamaasiyadeed oo Yurub ku tagi lahaa oo horey loo qorsheeyey, ka dib markii saraakiisha Midowga Yurub ay diideen inay la kulmaan, sababo la xiriira duulaanka dhismaha Kongareeska.
Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganeysa ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegaysa in xulafada Washington ay ceeb ku noqon doonto la kulanka Pompeo, kadib dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dhismaha Kongaraska.
Wakaaladda ayaa ku warantay in Wasiirka Arimaha Dibada ee Luxembourg Jean Asselborn iyo saraakiil sar sare oo reer Yurub ah ay diideen in ay la kulmaan Pompeo, taas oo ku khasabtay in uu baajiyo safarkiisa.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Luxembourg waxay xaqiijisay in booqashadii Pompeo la baajiyay, laakiin waxay diiday inay bixiso faahfaahin dheeri ah, marka lagu daro diidmada Midowga Yurub inay ka hadasho.
Asselborn wuxuu Trump ku tilmaamay usbuucii la soo dhaafay inuu ahaa “mid ku mashquulsan hurinta dabka siyaasadeed waana inuu hor yimaadaa maxkamad dambiyeed,” ka dib markii taageerayaashiisa ay weerareen Kongareeska Mareykanka.
Asselborn wuxuu kaloo tixgeliyey in madaxweynaha xilka baneynaya “uusan wax shuqul ah ku lahayn dimuqraadiyadda,” maxaa yeelay wuxuu “iska indhatiray dastuurka dalkiisa, go’aannada maxkamadda iyo natiijooyinka doorashada.”
Dhinaceeda, Waaxda Arrimaha Dibadda ayaa diiday inay ka hadasho diidmada saraakiisha Yurub ee la kulanka Pompeo, waxayna soo saartay qoraal ay ku sheegtay in booqashada loo baajiyay shaqo ku meel gaar ah darteed, ka hor xafladda caleema saarka madaxweynaha ee Joe Biden, labaatanka bisha.
Mike Pompeo waxaa loo qorsheeyay in uu joogo Brussels Arbacada iyo Khamiista si uu ula kulmo dhigiisa Belguim Sophie Vilmes iyo xoghayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg si “hoosta looga xariiqo muhiimadda waarta ee iskaashiga transatlantic” ee madaxweyne Trump uu inta badan wiiqay afartii sano ee la soo dhaafay. .
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka wuxuu sheegay in sidoo kale la joojiyay dhammaan duulimaadyada safarka ee Kelly Craft, oo ah safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobay, ee Taiwan.
Kraft ayaa lagu waday inay booqato Taiwan Arbacada ilaa Jimcaha, taas oo keentay in Shiinaha ay uga digto in Washington ay dab ku ciyaareyso.
Xoghayaha arrimaha dibedda Mike Pompeo ayaa sheegay Talaadadii in dhammaan safaradii toddobaadkan, oo ay ku jiraan safarkii Yurub la joojiyay iyadoo qayb ka ahayd wareejinta awoodda maamulka madaxweynaha la doortay Joe Biden.